Layisha okuthunyelwe kwakamuva ngesigaba ngemenyu ye-WordPress usebenzisa umthwalo we-jQuery | Martech Zone
Layisha okuthunyelwe kwakamuva ngesigaba ngemenyu ye-WordPress usebenzisa umthwalo we-jQuery
NgoLwesithathu, Januwari 9, 2013 NgoLwesithathu, ngoMashi 18, 2015 Douglas Karr
Uma uvakashele amanye amabhulogi amakhulu ngaphandle lapho athanda Mashable, ungaqaphela ukuthi banesistimu yemenyu enhle kakhulu eyehlayo futhi ikunikeze ukubonakala kokuthunyelwe kwakamuva kwebhulogi kusuka esigabeni ngasinye. Ukuqinisekisa ukuthi ikhasi alithathi unomphela ukulayisha, balayisha lokho okuqukethwe besebenzisa i-Ajax… bese beyilayisha kuqala kuphela ngemuva kokuthi ikhasi selilayishwe ngokugcwele.
Besifuna ukwenza okufanayo lapha ku Martech Zone. Ukunikeza ukuqonda ngezigaba esinazo, bengifuna ukukhombisa okunye okuthunyelwe ngaphakathi kwesigaba ngasinye. Sazi kahle i-WordPress, i-WordPress API kanye ne-jQuery kepha ngaze ngathola i-athikili ku- Ilanda Okuthunyelwe ngesigaba kusetshenziswa i-jQuery ukuthi sibe nesisombululo esihle.
Okokufundisa kunyathela umsebenzisi ngokwakha isifanekiso sokudonsa ngamandla okuthunyelwe, nokuthi ungazakha kanjani izixhumanisi ezingaqala isicelo. Bekungaba lula ukube besifuna nje ukwenza ezinye izixhumanisi, kepha empeleni besifuna ukusebenzisa i-WordPress 'eyakhelwe kwimenyu yokuzulazula. Ngeshwa kithi, izixhumanisi zemenyu zeWordPress zikhiqize izinombolo njengoba ungeza futhi ususa izinto zemenyu… kepha empeleni azinalo ulwazi ngesigaba ofisa ukusidonsa futhi usidlulise ocingweni lwakho lwe-Ajax.
Ukulebula izinto zohlu lwemenyu kahle, sifake ikhodi kusuka ku-WPreso, Ngeza ikhasi / iposi leslug ekilasini lezinto zemenyu.
Inkinga eyodwa kuphela… isebenza ekhasini noma kokuthunyelwe, kepha empeleni ayisebenzelanga Isigaba! Ngakho-ke sivuselele isicelo se-slug nge:
$ slug = thola_cat_slug ($ id);
Futhi ungeze umsebenzi kusuka kuma-WPRecipes, I-WordPress iqhinga: Thola isigaba slug usebenzisa isigaba ID, ukubuyisela emuva i-slug yesigaba kumfanelo yedatha kumenyu yokuzula.
Ngakho… sibonga imizamo yokubambisana yamasayithi ama-3 WordPress nokuhlenga okuhle okwenziwe yi-jQuery guru lethu ku- DK New Media, UStephen Coley (yokwenza bushelelezi imenyu), sinohlelo oluhle kakhulu lwe-submenu!
Tags: isigaba slugokuthunyelwe kwakamuva ngesigabaokuthunyelwe_ kombuzoimenyu ye-wordpress ajaxi-wordpress ajax submenuimenyu ye-wordpressimenyu ye-wordpress navwp_nav_menu
I-Whitepaper: Izindlela ezihamba phambili zokubhala isiphakamiso sokuthengisa
Jan 28, 2013 ku-2: 07 AM
Ingabe uyayibonisa noma uyithengise le khodi kwenye indawo? Kade ngazama ukuyenza isebenze kepha angikwazi ukuthola ukuthi ngifaka kanjani ku-wp_nav_menu nge-walker…
Jan 28, 2013 ku-9: 45 AM
@ facebook-526543707: disqus ngixhume kwikhodi engiyisebenzisile. Uzama ukuguqula ini?
Jan 29, 2013 ku-4: 57 AM
Ngiyabonga ngempendulo :). Kusebenza kahle esigabeni sami sokuqala, kepha kulokhu kuphela, kubonakala sengathi angiyitholi indlela yokuyiphinda inqubo yezigaba ngasinye (ileveli 2 yemenyu yami), nokuyimisa ekusebenzeni ezingeni 1 imenyu yami: /
Feb 4, 2013 ngo-6: 46 PM
Indlela engikwenze ngayo bekuwukufaka into yedatha entweni yohlu lwemenyu bese ngifaka leyo nto embuzweni.
Feb 24, 2013 ngo-12: 42 PM
Ngiyabonga, angikunakile lokho, kuyasebenza manje 🙂
Mar 17, 2015 ku-11: 07 AM
angifuni ukuthola noma iyiphi ikhodi ezosetshenziswa
isixhumanisi sokuqala asisebenzi
Mar 18, 2015 ku-12: 33 PM
Ngivuselele isixhumanisi kwisibonelo esisha - ungazise uma lokho kusebenza.
Ngo-Apr 12, i-2021 ku-1: i-47 PM
Sawubona lapho! Yilokhu kanye engikufunayo kuphrojekthi entsha. Noma yiliphi ithuba lokwabelana ngekhodi?